ရှေ့ access ကိုဖြေရှင်းချက် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
>> ဤတောက်ပသော LED display screen video module များသည်ရှေ့နှင့်နောက်ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုခွင့်ပြုသည်. သူတို့ကလုံးဝ WYSIWYG အောင်မြင်နိုင်ပါတယ် (သင်မြင်သောအရာသည်သင်ရရှိသောအရာဖြစ်သည်). ဥပမာ, သငျသညျရိုးရာ LED မျက်နှာပြင်၌မဆိုပျက်ကွက် module ကိုတွေ့ရှိလျှင်, အမှား module ကိုရှာပြီးဖြေရှင်းဖို့နောက်ဘက်ခြမ်းကိုသင်အချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့လိုတယ်. သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ရှေ့မျက်နှာပြင် LED ကိုအသုံးပြုပါ, ပျက်ကွက်မှုပုံစံကိုသင်ချက်ချင်းရှာပြီးရှေ့ဘက်မှတိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်.
>> Front access design သည် LED panel များမှမည်သည့် LED panel ကိုမဆိုရရှိနိုင်သည်, နောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်နေရာမရှိတော့သောအချို့သောအထူးနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်. နေရာများစွာသိမ်းဆည်းရန်လည်းကူညီနိုင်သည်.
>> အမြန်သော့ခတ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စုဝေးရန်လွယ်ကူမြန်ဆန်စေသည် & ဖြုတ်. ဒါဟာသင်သာကြာပါသည် 8 စက္ကန့်ပိုင်း. ဒီနှင့်အတူ, သင်အချိန်နှင့်လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာလိမ့်မည်။>> ၎င်းကို Smartile ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း / အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့အတွက်ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒိုတွေအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီး pixel pit module တွေအကုန်လုံးကကက်ဘိနက်ဖွဲ့စည်းပုံတွေအတွက်လုံး ၀ သင့်တော်လို့ပဲ.